Ny lalana nodiaviko mety tsy ho itanao Tsy misy toa anao izay tojo azy Ianao irery ihany no toa anao Ianao no ho ahy e! Tsy misy hanazava hoe atraiza ny hery miafina Nanosika antsika ho tody teo Tody teo aloha isika, teo amin’ny toerana avo indrindra. Tsy tiako hovna intsony lasa zarako aza ianao mifanojo lalana amiko Saingy tsy ho zakako intsony ny hanafina na hanarona ny toe-draharaha misy Marina fa be ny olana raha ho visaina Ireo tsy tia sy fahavalo koa hanenjika avy hatrany Kanefa izany ve no hamoizako anao Vao may mitombo ny fitiavako miha-romotra. Eto aho mitanisa ireo zavatra efa vita dia malahelo! Mitamberina ao an-tsaiko ireo vetso-po tanaty Nobitsihinao mangina am-poto-tsofiko eo mazna Rehefa injay isika resin’torimaso iny Fa any ianao izay ry tiako.
Tsy tiako hovna intsony lasa zarako aza ianao mifanojo lalana amiko Saingy tsy ho zakako intsony ny hanafina na hanarona ny toe-draharaha misy Marina fa be ny olana raha ho visaina Ireo tsy tia sy fahavalo koa hanenjika avy hatrany Kanefa izany ve no hamoizako anao Vao may mitombo ny fitiavako miha-romotra Enga anie ianao hiandry ahy fa izaho Dia hiandry anao foana e! Tsy misy hanazava hoe atraiza ny hery miafina Nanosika antsika ho tody teo Tody teo aloha isika, teo amin’ny toerana avo indrindra. Ignorer As your browser speaks English, would you like to change your language to English? Tsy aiko intsony ny manafina Efa fantatrao izany ka aza omena tsiny aho Ny fiatsapazako avy atrany Ny ranomasoko nijohy teo am-pandehananao Mitoy tsy ankijanona, mikoriana hatrany hatrany ao anatiko ao e! Enga anie ianao hiandry ahy fa izaho Dia hiandry anao foana e!
Pour que tout fonctionne correctement, veuillez rafraîchir le site. Midobodoboka tsy mijanona ny foko Mierika tarikw masoko mitady tsy mahita Ny eritreritro tsy mety fa manjohy anao hatrany Manontanty, mitomany. Mitamberina ao an-tsaiko ireo vetso-po tanaty Nobitsihinao mangina am-poto-tsofiko eo mazna Rehefa injay isika resin’torimaso iny Fa any ianao izay ry tiako.
Eto aho mitanisa ireo zavatra efa vita dia malahelo! Tsy misy hanazava hoe atraiza ny hery miafina Nanosika antsika ho tody teo Tody teo aloha isika, teo amin’ny toerana avo indrindra. Tsy hain’iza ho azavaina Tsy vitan’iza ho ravna.
Tsy tiako hovna intsony lasa zarako aza ianao mifanojo lalana amiko Saingy tsy ho zakako intsony ny hanafina na hanarona ny toe-draharaha misy Marina fa be ny olana raha ho visaina Ireo tsy tia sy fahavalo koa hanenjika avy hatrany Kanefa izany ve no hamoizako tarkka Vao may mitombo ny fitiavako miha-romotra.
Rahoviana ianao ry tiako vao ho tonga raitrw indray Hampionona ahy, rahoviana?